राष्ट्रिय समाचार Archives - NepalPatra.com
खाद्य संस्थानमा खसी किलोको ४५५ र च्याङ्ग्राको ६७५
असोज ५, काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानले दसैंका लागि बिहीबारदेखि खसी र च्याङ्ग्राहरुको बिक्री सुरु गरेको छ । संस्थानले मुस्ताङबाट काठमाडौंमा ५०० च्याङ्ग्रा र दाङको तुलसीपुरबाट २०० खसी भित्र्याएको हो । संस्थानले मुस्ताङबाट एक हजार च्याङ्ग्रा एवं तुलसीपुर र हेटौंडाबाट १५ सय खसी ल्याउने जनाएको थियो । बाँकी १३ सय खसी र ५०० च्याङ्ग्रा पनि […]
स्थानीय तह निर्वाचनपछि संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्यो : दाहाल
असोज ५, कपिलवस्तु, । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढेको बताएका छन् । उनले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने बताए । माओवादी केन्द्रको जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति कपिलवस्तुद्वारा बिहीबार कृष्णनगरमा आयोजित आमसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले अब मुलुकलाई आर्थिक […]
विश्व गैँडा दिवस, बाढीपछि अलपत्र परेका एकसिङ्गे गैँडाको अनुगमन गरिने
असोज ५, काठमाडौँ | प्राकृतिक प्रकोपका कारण दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडाको बासस्थान खल्बलिएको र कतिपय गैँडाको मृत्युसमेत भएकाले तिनीहरुको अवस्था पत्ता लगाउन चितवन निकुञ्जमा गैँडाको अनुगमन गरिने भएको छ । प्रकोपका कारण गैँडामा परेको असर पत्ता लगाई संरक्षणको नयाँ रणनीति निर्माणका लागि अनुगमन गर्न लागिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो […]
पोखरामा सिटी रेबान फुड फेस्टिबल जारी, देवीघर्ती सँगै नाचे दर्शक
असोज ५, पोखरा | नयाँबजारको प्रदर्शनी केन्द्रमा सोमबारदेखि जारी छैटौं संस्करणको सिटी रेबान महोत्सव तथा फुड फेस्टिभलमा बुधबार ७लाख बढीको कारोवार भएको छ । करिब ८ हजार दर्शकले मेलाको अवलोकन गरेको कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक तीमिल्सेनाले जानकारी दिए । ‘हरेक दिन अवलोकनकर्ताहरुको संख्या बढ्दो छ । दसैंको अवसरमा हूने सार्वजनीक बिदा पछि यो संख्या अझै बढ्नेमा […]
यस पटकको दशैँ पनि भूकम्पपिडित टहरामा नै बिताउन बाध्य
असोज ५, काठमाडौँ | बाढीपीडितको दसैँ पनि छाप्रोमै दुई वर्षअघि आवास गुमाएका झन्डै ६ लाख भूकम्पपीडितले यस वर्षको दसैँ पनि छाप्रोमै मनाउने भएका छन् । निजी आवास निर्माण सुस्त हुँदा उनीहरू टहरोमै दसैँ मनाउन बाध्य छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभर ६ लाख ३७ हजार पाँच सय १८ भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । […]
प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको मतपरिणामः कहाँ को-को भए विजयी ?
असोज ५, काठमाडौँ । प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेसम्म ७ स्थानको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । अहिलेसम्म घोषित परिणामअनुसार नेकपा एमाले २ स्थानीय तहमा विजयी भएको छ । त्यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम २ स्थानीय तहमा विजयी भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी एक÷एक स्थानीय […]
असोज ५, काठमाडौँ । यस वर्षको बडा दशैं आजबाट सुरु भएको छ । नवरात्रको पहिलो दिन आज घरघरमा देवी दुर्गाको प्रतीमा स्थापना गरी घटस्थापना गरिँदै छ । आज घटस्थापनाको साइत बिहान ९ बजेर ४१ मिनेटमा शुभ रहेको पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ । काठमाडौंको हनुमान ढोकास्थित दशैं घरमा पनि घटस्थापनाको शुभसाइतमा जमरा राखिँदैछ । आश्विन […]
निर्वाचनमा सहभागी हुनुलाई संविधान स्वीकारेको अर्थमा बुझ्न हुँदैन : महन्थ ठाकुर
असोज ४, काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमन्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुनुलाई संविधान स्वीकार गरेको अर्थमा बुझ्न नहुने बताएका छन् । नेपाल कानुन समाजले बुधबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रियामा उनले अहिलेको संविधान विभेदकारी भएकाले यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जुन […]
ओलीले भने–‘दुर्गाभवानीले अदालतको स्वाधिनताको रक्षा गरुन्’ !
असोज ४, चितवन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयमा ‘सेटिङ’ चल्न थालेको भन्दै सच्चिन आग्रह गरेका छन् । बुधबार नवपरासीको गैंडाकोटमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने–‘कठैबरी नेपालको अदालत ! मेरो शुभकामना छ, अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न सकोस् । […]
कास्कीमा मात्रै ३१ हजार ५९० मतदाता थपिए : क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय पोखरा
असोज ४, काठमाडौँ | कास्कीमा ३१ हजार ५९० नयाँ मतदाता थपिएका छन् । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय पोखराले गएको साउन १ देखि भदौ ३ गतेसम्म सञ्चालन गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा ती नयाँ मतदाता थपिएका हुन । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी मतदाता नामवली संकलन गरिएकोमा ३९ हजार ४०१ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए । […]
को को थपिए नेपाली कांग्रेसबाट १० मन्त्रीहरु ?
को को थपिए नेपाली काँग्रेसबाट १२ राज्यमन्त्रीहरु ?
© 2017 Nepalpatra.com, Website developed & managed by:Frntech